GUTANA NOKUDZWA KWENYIRA!
A Couple for the Road is Cultural Travel and Culinary Blog celebrating travel internationally, food, and traditions!
Tichifamba pamwe chete takatanga muna July 2007 muNashville, uye kubva panguva iyo takatamira uye takaenda kune dzimwe nzvimbo dzinoshamisa, uye takaona nekuita zvimwe zvinhu zvinoshamisa mune dzimwe nzvimbo dze50 pasi rose.
Tsvaga iyo SITE!
SHOKO ROKUDA ​​KWENYAYA uye KUTENGA ZVINOKOSHA!
Makumi maviri nemashanu apfuura Colombia yakanga ichizara padanho rekutadza kufema uye Medellín, iro guta reAndean guta rechipiri rakakura kwazvo yaive renco war zone. Mhirizhonga iyi yakagadzira mukurumbira uyo wagara uchifukidza iro guta… Read More
Kubvira pakupera 1800's, ngano yemukurumbira Jack the Ripper Murders muLondon End East yakafadza vanyori venhoroondo uye vevanofarira vanofarira kutenderera pasirese. Zvino, kududzira kwakanyanyisa kunanga kwezviitiko mu… Read More
Paris inoramba iri imwe yenzvimbo dzenyika dzinozivikanwa kushanya, zvichigadzira dambudziko kune avo vari kutsvaga pekugara muParis. Nzvimbo dzinozivikanwa zvikuru, ndidzo, dzakakurumbira, uye nzvimbo dzakanakisa nemahotera… Read More
"Best Bars muSan Francisco" yakanyorwa naIna McFadden - bhaglogi yekufamba uye munyori wekuzvipira. Pakutanga kubva kuCalifornia, ave achinyanya kufamba pasi kubvira 2013. Apo iye asina kunyora, iwe unogona ... Read More
Kana iwe uchitsvaga inokurumidza, yakaderera-carb, uye ine hutano appetizer iyo iri kuzadza zvakakwana kuti iwe ugare uine chizere, aya e-Italian-maitiro akarongedzwa portobello mushwa akakwanira iwe! Uchishandisa zvimiro zvechinyakare zveItaly, unogona kuita ... Read More
SIGN-UP YOKUTAURA MAZANO, MAZANO, NEZVAKURU ZVAKADZWA!
Ndapota nyora kero yakakodzera ye-email.
Chimwe chinhu chakakanganisika. Ndapota chengeta zvinyorwa zvako uye edza zvakare.
ZVINHU ZVAKAWANDA ZVINOKUDZIDZA
Villa Borghese (nhasi Borghese Gallery Rome) yakasikwa kugamuchira kukosha kwakakosha kadhidheni Shipyon Borghese (Scipio Borghese), uyo aifarira zvekuunganidza mabasa oumhizha. Akanga akasiyana nerudo rwechokwadi ... Read More
Zvinhu Zvokuda Kuita MuRoma Pausiku
Roma iguta rakangotarisa usiku sezvinenge riri masikati, uye sechiedza chechisikigo chinopera, magetsi emugwagwa anobereka guta iro nenzira yakasiyana usiku .... Read More
Chero pese patinenge tichienda kune imwe nyika tinoita kuti tive nekuenzanisira kutengesa mahara uye nzvimbo dzinonaka, kunyanya ndiro dzekudya. Asi kakawanda sei patinosvika pakuona uye kunzwisisa kuti ivo vakanyatsogadzirwa sei, kunyanya ne ... Read More
Ndekupi Kwokugara Mu Santorini
Kusarudza pokugara ku Santorini, Greece ndeimwe yezvisarudzo zviri nyore zvaungaita mukufamba. Sei? Zviri nyore - hapana nzvimbo yakaipa yekugara (kana kuti, pane) Santorini. Greece's most ... Read More
Kugovera mabhuku kunowanikwa kupfuura vafambi vekufamba, vanogona-kutungamirira, kana avo vanoda kutsvaga zvinotevera kuburikidza nekufungidzira nekupikisa pfungwa dzevanhu. Kutaura kwemashoko, muzvokwadi, kwakave chikamu chakaoma chebasa rese rekudzidzira ... Read More
New England Clam Chowder ndeyekuAmerica, inotendwa kuendeswa kune nechokumaodzanyemba kwakadziva kumadokero nemaFrench ekupinda munyika ye1700s. Yakawedzerwa mukuzivikanwa seyomwoyo, yakagadzirirwa kudya kusvikira yawana kusaziva ... Read More
Shrimp Fra Diavolo inonzwika sechidimbu chechokwadi cheItaly, asi hachisi. Ichokwadi kuti brainchild yevaItaly vanoenda kune dzimwe nyika vakange vauya kuAmerica, yekare yekabi iyi inofungidzira zvakanakisisa, asi yakawanda ... Read More
Nyika Gabiwa Casserole
Kukura mumaruwa America, kudya kwemazuva ose kwaive nguva yakawanda. Yaiva nguva iyo mhuri yakaungana pamwe, yakagadzirwa, uye yakatanga zuva. Chii chaive chiri nguva dzose chiri pakati pe ... Read More
Chicken Tetrazzini isidhori yeAmerica, inonzi yakasikwa mu Palace Palace muSan Francisco, uko panguva iyo nyanzvi yeItera nyanzvi Luisa Tetrazzini aigara. Yakanga yakakurumbira mukurumbira pakati pemakore ekuma 20th ... Read More
Low Carb Yakagadzirirwa Peaches neVanilla Ricotta
Izvi ndizvo zvakaitwa naTracy kumba pamba, uye maminitsi 20 gare gare takanga tine dessert inoshamisa (uye yakadzika!)! Inoshandisa zvishoma zvishandiso zvishoma, uye inonaka se dessert ne ... Read More
Iva nemibvunzo pamusoro pekufamba kwako kwotevera?
Regai tizive - tinofara kubatsira!